क्रिपिएस्ट शहरी किंवदन्ती प्रत्येक States० राज्यको भाग १०
घर	हरर मनोरन्जन समाचार	क्रिपिएस्ट शहरी किंवदन्ती प्रत्येक States० राज्यको भाग १०
by Waylon जोर्डन जनवरी 18, 2021
by Waylon जोर्डन जनवरी 18, 2021 4,149 हेराइहरू
के हामी वास्तवमै अमेरिकाको माध्यमबाट हाम्रो शहरी कथाको अन्त्यमा पुगेका छौं? मलाई लाग्छ हामीसंग छ। यो विश्वास गर्न लगभग गाह्रो छ, तर यहाँ हामी हाम्रो डरलाग्दो यात्रामा अन्तिम पाँच राज्यहरूको साथ छौं र मलाई आशा छ कि तपाईंले उनीहरूको बारेमा जति लेख्नुभयो त्यति नै तपाईंले पढ्नुभयो।
अब, केवल किनभने यो यात्राको अन्तिम अध्याय हो, आशा नहेर्नुहोस्! यी अन्तिम पाँच मात्र पहिलो राम्रो छन्, र जब हामी राज्यहरूबाट टाढा हुन्छौं, तपाईंलाई थाहा हुँदैन हामी कहाँ जान्छौं!
तपाईको मनपर्ने सहर लिजेन्ड के सबै समय हो? हामीलाई टिप्पणीहरूमा थाहा दिनुहोस्!
मार्फत फोटो फ्लिकर
मैले भर्जिनियामा पुग्न धेरै समय कुर्नु पर्‍यो त्यसैले म बुन्नेम्यानको बारेमा कुरा गर्न सक्थें। कथा बिल्कुलै मलाई मोहित गर्दछ। यो एक सच्चा शहरी किंवदन्ती हो, जुन १ 1970 in० मा दुई घटनाबाट जन्मिएको हो, जसले आफ्नै र प्रेरणादायी कथाकारहरू, फिल्म निर्माताहरू, कलाकारहरू, र संगीतकारहरूको जीवन लिन्छ।
यो त्यहि हो जहाँ भर्खर, भर्जिनियामा शुरू भयो:
अक्टोबर १,, १ 19 On० मा, वायुसेना एकेडेमी क्याडेट रोबर्ट बेनेट र उसको मंगेतर पार्क गरिएको कारमा बसिरहेका थिए जब सेतो खरायोको पोशाकमा एक जना मानिस रूखबाट बाहिर दगुर्दै आउँदैछ कि ती दुई जनालाई टोपीले कराउँदै थिए, “तपाई निजीमा हुनुहुन्छ। सम्पत्ति र मसँग तपाईंको ट्याग नम्बर छ! ”
त्यस मान्छेले गाडीमा ह्याचेट फ्याँक्यो, जुन झ्यालबाट फुटेर फ्लोरबोर्डमा उत्रियो जब बेनेट त्यहाँबाट भत्काइयो। तिनीहरू ज as्गलमा फर्कनु अघि तिनीहरू भाग्न को रूप मा मानिस तिनीहरूलाई चिच्यायो।
दस दिन पछि अक्टोबर २ on मा, निर्माण फिलिपिन्स गार्ड, फिल फिलिप्सले खैरो, कालो र सेतो बन्नी सूटमा एक मानिसलाई भेट्टाए। फिलिप्सले आक्रमणकारीलाई धेरै राम्रोसँग हेरी, जसलाई उसको करिब २० बर्ष उमेर, 29'20 डिग्री र थोरै मोटाको रूपमा वर्णन गर्दैछ। त्यस मानिसले पोर्च पोस्टमा बन्चरो झार्न थाल्छ, चिच्याउँदै, "तपाई अपराध गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईं नजिक आउनुभयो भने, म तपाईंको टाउको काटिदिनेछु। ”
फेयरफ्याक्स काउन्टी पुलिसले ती घटनाहरूको अनुसन्धान खोले जुन दुबै साक्षात्कारको अभावमा बन्द भए।
यद्यपि स्थानीयहरूको कल्पना स्पार्क गर्न पर्याप्त थियो।
त्यसपछि के भयो शहरी कथा सुन हो। चाँडै नै रहस्यमय बन्नीमान र उसको उत्पत्ति साथै उसको मनसायको बारेमा कथाहरू बढ्न थाले।
यस्तै एउटा कथा १ 1904 ०XNUMX मा फेरि यात्रा भयो जब दुई शरणमा परेका बिरामीहरू क्षेत्रको नजिक जंगलमा भागे। चाँडै स्थानीयहरूले छाला, आधा खाए खरायो लास भेट्टाए। अन्तत: ती मध्ये एक फेयरफ्याक्स स्टेशन पुलमा एउटा क्रूड, हातले बनाएको टोपीमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटियो र अधिकारीहरूले त्यो अनौठो घटना समाप्त भएको अनुमान गरे। यद्यपि, धेरै खरगोश शवहरू फेला परेपछि, यो अर्को भागेर अझै लुक्नको लागि मात्र हो भनेर स्पष्ट भयो।
अब, तिनीहरू भन्छन्, बन्नीमान अझै पनि इलाकामा लुकेका छन् र स्थानीयलाई आतंकित बनाउँछन् र उनका पीडितहरूलाई हेलोवीन नजिकै आइपुग्न पुलबाट झुण्ड्याउँदैछन्। अवश्य पनि, यसको कुनै प्रमाण फेला परेन, तर यसले आमाबाबुलाई आफ्ना बच्चाहरूलाई हेलोवीनमा सतर्क हुन चेतावनी दिन रोक्दैन नत्र तिनीहरू बुन्नीमानको सिकार हुन्छन्।
यो कथाहरूको केवल एक संस्करण हो जुन पौराणिक खलनायकको चारैतिर उगिएको छ, र यो मेरोलागि रमाईलो छ कि यो सब एक व्यक्ति द्वारा १ 1970 s० को दशकमा दुईवटा घटनामा बढेको जस्तो देखिन्छ जुन उपनगरीय छिमेकको निर्माणसँग नाराज देखिन्थ्यो। क्षेत्रमा।
यदि तपाईं बन्नीम्यानको बारेमा थप जान्न चाहानुहुन्छ भने, म जेनी कटलर लोपेजको लेख "बन्नीमानलाई लामो समयसम्म बाँच्न" सिफारिस गर्दछु। २०१ Vir बाट उत्तरी भर्जिनिया पत्रिका। यसले प्रारम्भिक घटनाहरूलाई समेट्छ तर यो बन्नीमानको वरपर कसरी हुर्किएको छ त्यसमा जान्छ।
वाशिंगटन: मेरिनर हाई स्कूलमा चम्किरहेका आँखाहरू
द्वारा छवि yhiae अहमद बाट pixabay
एभरेट, वाशिंगटनको मारिनर हाई स्कूल थोरै विवरणको लागि बाहेक देशको कुनै पनि हाई स्कूल जत्तिकै हो। स्कूलको केही बत्तीहरू रातको कुनै पनि अन्य जस्तै छोडिराखेको छ, मध्यरातको केही रातहरूमा, बत्तीहरू अन्धकारमा मैदान डुब्ने बन्द झल्काउनेछ।
जब यो हुन्छ, केही स्थानीयहरू भन्छन्, तपाई स्कूलको अन्धकारबाट चम्किरहेको आँखाको जोडी देख्न सक्नुहुनेछ। अरू केटाकेटीहरू छन्, यदि तपाईं उनीहरूको आँखामा लामो समय सम्म हेर्नुभयो भने, तपाईंले स्कूल भित्र पखेटा भएको मान्छेको व्यक्तित्व देख्न थाल्नुहुनेछ।
के यो केही अनौपचारिक, अलौकिक शुभंकर हो? के मोथम्यानको सानो भाई राती कक्षाकोठामा जान्छन्? कोही निश्चित छैन, तर तिनीहरू भन्छन् कि तपाईले उनीहरूलाई देख्नु भन्दा पहिले तपाईका आँखाले हेरिरहनु भएको, र कि यो सूचीको लागि यसलाई सही प्रकारको डरावना बनाउँदछ।
वेस्ट भर्जिनिया: मोनोनगालिया काउन्टीको हेडलेस विद्यार्थीहरू
यो शहरी किंवदन्ती अर्को हो जसले जनवरी, १ 1970 .० मा भएको दुःखद र अत्यन्त वास्तविक हत्या घटनाबाट जीवनलाई आकर्षित गर्‍यो। दुई सह-एड्स, मारारेड मालेरिक र करेन फेरेल, जनवरी रातमा चलचित्र छोडेपछि एउटा सवारी हिड्न खोजिरहेका थिए। तिनीहरु फेरि कहिल्यै देखेनन् जब सम्म उनीहरूको काटिएको शव महीना पछि ज wood्गलमा भेटिएन।
स्थानीय व्यक्तिहरू त्यो घटना देखेर ठीकै भयभीत भएका थिए र पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि यो सुल्झाउन सकेन जब सम्म यूजीन क्लोसनले एक व्यक्तिले हत्याको कुरा स्वीकार गरेनन्। यहाँ कुरा छ, यद्यपि। क्लव्सन निर्धक्कै नराम्रो मान्छे थिए भने - उनी १-वर्षीया केटीलाई बलात्कारको अभियोगमा दोषी ठहरिएको थियो - धेरै व्यक्तिले सोचेका थिएनन् कि उनी वास्तवमा प्रश्नमा रहेका दुई युवतीको हत्याको दोषी थिए।
यो केस पोडकास्ट, अनुसन्धान र क्लाउसनको पक्राउ र सजाय भएदेखि पुस्तकहरूको विषय भएको छ र कसैलाई पनि उसले वास्तवमै यो अपराध गरेको ठान्दैन।
त्यसो भए कसले? प्रत्येक अन्वेषकको लागि, त्यहाँ एक फरक संदिग्ध छ, र यो भन्न गाह्रो छ।
हामीलाई के थाहा छ कि त्यस समयदेखि, मार्ट र करेन अन्तिम पटक देखिएको ठाउँमा सडकको छेउमा दुई हेडलेस महिलाहरूको अफवाहहरू र रिपोर्टको रिपोर्टहरू क्रप भएको छ। वास्तवमा, एक भन्दा बढी कार दुर्घटनाको कारण मोटर चालकहरूको ध्यान भंग हुने अनुप्रयोगहरूमा दोष लगाइएको छ।
के यी आत्माहरूले आफ्नो अन्तिम क्षणहरू र युवा जनहरूलाई हिचकि ?को खतराहरूदेखि सचेत गराउन शोकको घटनाले भरिएको शहरी किंवदन्ती आराम गरिरहेका छन्?
विस्कॉन्सिन: रिजवे उर्फ ​​द रिजवे भूतको प्रेत
द्वारा छवि ली आशा बोन्जर बाट pixabay
डजभिलको नजिक एक्लो सडक, विस्कनसिन एक डरलाग्दो प्रेतको घर छ जुन कथित दुई भाइहरूको संयुक्त भावना हो जुन १ 1840० को दशकमा भएको झगडामा मरे।
त्यस समयदेखि, मानौं 40० बर्षको चक्रमा, प्रेत फर्कन्छ। के यो शहरी किंवदन्ती को बारे मा विशेष गरी डरलाग्दो छ, तथापि, आत्मा को आकार बदल्ने तत्व हो। विभिन्न समयमा, रिजवे भूत कुकुर र सुँगुर जनावरको रूपमा देखिएको छ साथ साथै पुरुष र महिला र आगोको ठूलो बलहरु को रूप लिन। कम्तिमा एउटा रिपोर्टले टाउकोविना घोडसवार समावेश गरेको छ।
केही स्थानीयहरूले प्रेतको हेराईमा प्रँकस्टरहरूको काम देख्दछन्, तर जसले घटनाको अनुभवलाई अनुभव गरिसकेका छन् उनीहरूले तपाईंलाई अन्यथा भन्नेछन्।
वायोमिंग: उत्तरी प्लेट नदीमा मृत्युको शिप
द्वारा छवि enzol बाट pixabay
मaको शोषक हुँ राम्रो जहाज कथा ...
१ 1860० को दशकदेखि, एक रहस्यमय प्रेत पोत वायोमिंगको उत्तरी प्लेट नदीको किनारमा रिपोर्ट गरिएको छ। यो दिनको बीचमा कुहिरो बैंकमा देखा पर्दछ - जब त्यस्ता चीजहरू सामान्यतया अवस्थित हुँदैन - र छायाँबाट तानिन्छ, यसको डेकमा प्रेतवादी टोलीले ठंढ छोपेको हुन्छ।
यस जहाजको बारेमा सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा के हो भने यो कसैको मृत्यु हुनुभन्दा ठीक अघि देखा पर्दछ। यसबाहेक, तिनीहरू भन्छन् कि तपाईले जहाजको डेकमा मर्ने नियतको व्यक्तित्वको अवलोकन देख्नुहुनेछ, बाँकी चालक दल जस्तो हिमाले कभर।
मृत्युको शिप को बारे मा असंख्य कथाहरु छन्, तर म केवल यो तपाईको राज्यमा मात्र रेकर्ड गरिएको साझा गर्छु।
१०० बर्ष भन्दा पहिले, लियोन वेबर नामका एक ट्र्यापरले स्पेक्ट्रल जहाजको साथ उसको भेट हुने खबर गरे। सुरुमा, उनले देखेका सबै कुहिराहरू को एक विशाल गेंद थियो। उनी नजिकबाट हेर्न नदीको किनारमा पुगे र घुमाउरो भीडमा ढु stone्गा पनि हाने। यो तुरुन्तै एक नौकायन जहाजको रूप लिए, यो मस्तूल र पाल चाँदीमा कभर, स्पार्कलिंग फ्रोस्ट।
वेबरले धेरै नाविकहरू देख्न सक्थे, शीतमा पनि कभर, जहाजको डेकमा केही सुस्त भएको वरिपरि भीड। जब उनीहरु उसको लागी स्पष्ट दृश्य बताउन पछि हटे, उनी छक्क परे कि यो हेर्दै गरेको एक केटीको लास थियो। नजिकबाट हेर्दा, यात्रीले उनलाई उनको मंगेतरको रूपमा चिने। एक महिना पछि ऊ घर फर्कंदा ऊ छक्क परेको कल्पना गर्नुहोस् जब उसले थाहा पायो कि उसको प्रेमीको मृत्यु भयो उही दिन उसले भयावह दृश्य देख्यो।
यी कथाहरूको अधिकको लागि, यहाँ क्लिक.
ठिक छ ... त्यो हो। हामीले अमेरिकाका c० राज्यहरू मध्ये प्रत्येकबाट मेरो मनपर्ने डरलाग्दो शहरी किंवदन्तीलाई कभर गरेका छौं के तपाईंसँग मनपर्ने छ? के त्यहाँ अरुहरु थिए जुन तपाईले मन पराउनु भएको थियो? हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाईं तल के सोच्नुहुन्छ!